Home » 2018 NAB ပြရန် » အားလုံး NAB Show ကိုအစားကောင်းကြိုက်သူများ Calling: Las Vegas စားသောက်ဆိုင်များ! #NABShow @NABShow
သငျသညျစာသားပင် Las Vegas မှာအသက်ရှူဖို့အဟောင်း 21 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကတည်းကကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမျိုးစုံမြည်းစမ်း GRUB ကိုရှာပါ (ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အလှဆင်ခြင်းမရှိ "ဒေသခံတွေသာ" အစက်အပြောက်, ဖြစ်ကြသည်အချို့သောအရာ၏) ကိုအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်များ 21 ရွေးကောက်တော်မူပါတယ် ရရှိနိုင်ပါ! သငျသညျစိတျမဟုတျဘဲလူတိုင်းကိုအရပ်ရပ်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ဦးချင်းစီသည်တဦးတည်းမှာပြည့်စုံရာအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်! ငါပြောနိုင်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် - NAB ရပ်တန့်နှင့်အသားညှပ်ပေါင်မြည်းစမ်းဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်! ဤတွင်အကြှနျုပျ၏အရသာရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုနေသောခေါင်းစဉ်:
ယခုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါအနီးကပ်သူငယ်ချင်းမိသားစုနှင့် Tao ရဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုထမ်းများအတွက်သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပစ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါဆာဗာမိမိလက်သို့တစ်ခုလုံးကိုညစာကိုယူပါစေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာများကိုအမြိုးမြိုးနှငျ့အတူဤအရူးပျော်စရာငါးခုသင်တန်းမုန့်ညက်အတူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဘာပေါက်ကွဲမှု! ကျွန်တော်တို့ 10 အကြောင်းရှိခဲ့သည် ... ငါပျားရည်ဂျင်း glaze မုန်အကြံပြုနိုငျ? Shiitake မှို & Lotus Root ၏ပေါင်းစပ်ငါ့အဘို့ကဘာပါ! အဆိုပါ 60,000 စတုရန်းပေ, Multi-ပုံပြင် "အာရှစီးတီး" အိမ်များစားသောက်ဆိုင်, ပွဲသို့စက်ရုံများ, Lounge, နိုက်ကလပ်နှင့်ကမ်းခြေ - တစ်ဂတ်စ်-ကြည့်ရပါမည် !!!
ကာဗွန်အီတလီစားသောက်ဆိုင် (3730 S ကို Las Vegas မှ Blvd. #877-230-2742) website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
အဆိုပါ-Aria ဟိုတယ် & ကာစီနိုအတွင်း၌တည်ရှိသည်, ကာဗွန်အီတလီစားသောက်ဆိုင်ဿုံကိုပြင်ဆင်ဂန္အီတလီအစားအစာဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်ဦးကအပြည့်အဝဘား timeless အစားအစာဖြည့်ပြီးအံ့သြစရာချောင်းမြောင်းန်ထမ်းများအတှေ့အကွုံထွက်စာရငျး။ ဒီ unpretentious နှင့်အဆင်ပြေ, သေးကြော့, စားသောက်ဆိုင်တို့ပါဝင်သည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခါပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကျောက်ပုဇွန် Fra Diavolo စံပြဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါမနည်းမျှော်လင့်ထား။
ကဲသာဘုရင်၏အတွင်းပိုင်းတွင်တည်ရှိသောမစ္စတာ Chow ဘေဂျင်း-စတိုင်တရုတ်ချက်ပြုတ်ပါရှိပါတယ်။ chic, ကြော့နဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မစ္စတာ Chow ရိုးရှင်းစွာစတိုင် radiates ။ တစ်ဦးကမိုဘိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာမျက်နှာကျက်ကနေဆိုင်းငံ့နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအရောင်အလင်းအမှောင်ပြောင်းလဲနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူ lit အပိုဆောင်းဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးစွမ်းသည်။ Service ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှိ၏ စားသောက်ဆိုင်သိသာသို့သော်မိသားစုအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ပိုကြီးသောအုပ်စုများအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဆီသို့ရည်ရွယ်သည်။ လူပျိုညစာစားပွဲများအတွက်ထွက်ရပ်တယ်။ အဆိုပါလက်မှတ်ပန်းကန်ပီကင်းဘဲ, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခေါက်ဆွဲလက်ဆွဲထုတ်! အချို့မိတ်ဆွေများကိုဆောင်ကြဉ်း - ဒါဟာစားသောက်ရန်ကြည်နူးဖွယ်ရာအရပ်ကိုပဲ!
ရှေ့မှာရှိတဲ့အပေါင်ဆိုင်ကိုသင်အရူးမသွားပါစေနဲ့! ဤမြို့သည်အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်တစ်ကယ့်ကိုအေးမြခေတ်သစ် Speakeasy ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုပါ - ဤသည်သင်၏အဘိုးရဲ့ speakeasy မဟုတ်ပါ! လူသတ်သမားအချိုရည် ... ဒါပေမယ့်ပင်ပိုကောင်းအစားအစာ! ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါအကြံပြု 34 အောင်စ။ 40-Day ကိုအပူပိုင်း-ဘိုးဘွားရိပ်သာ Tomahawk Ribeye ကင်, အလှအပ Essex လက်မှတ်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင် - အနက်ရောင် truffles hollandaise သို့မဟုတ်လှော်ကြက်သွန်ဖြူ & ဘေကွန်ဖြစ်စေ ... နှစ်ဦးစလုံးအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးသူတော်ကောင်းတရားများမှာ! သူတို့နေ့ရက်ကာလ၌ဆိုသညျကားဖို့အသုံးပြုအဖြစ် - ကပျား-ဒူးထောင်!
သငျသညျအတတျနိုငျဆုံး Las Vegas မှ / NAB အတွေ့အကြုံရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်သင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ်ကဤနေရာများအဖြစ်အများအပြား patronize ရန်သေချာစေပါ! NAB Show မှာသင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
2015 NAB ပြရန် 2016 NAB ဘား ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ကဖီး ညနေစာ ထမင်းစားခန်း စား စားဟင်းလျာများ အစာ ကင် NAB 2015 NAB ပြရန် NAB Show ကို Las Vegas မှ NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး အာဟာရဖြစ်စေသော စားသောက်ဆိုင်	2019-04-02
ယခင်: Imagica Group မှ Pixelogic အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို
နောက်တစ်ခု: 2019 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများစာရင်း: ပြရန်ပါတီများ NAB ။ #NABShow @NABShow